Indlu esemaphandleni ejonge iLake Andalucia - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni ejonge iLake Andalucia
UFinca del Cielo uyonwabela iimbono ezimangalisayo zepanoramic ngapha nangapha kweChibi lase-Iznajar. Yindlu yasefama entle ebuyiselweyo, eyahlulahlulwe yangamagumbi amabini azimeleyo kwaye emi phezulu kwindlela ejikajikayo. Ibekwe kumda weSierra Subetica, yindawo efanelekileyo kwabo bafuna uxolo kunye nokuzola kwaye njengesiseko sokufumana ulonwabo oluninzi lwaseAndalucia. Amaqela ukuya kuthi ga kwiindwendwe ezi-4 ezinqwenela ukurenta le cottage ziyakonwabela eyabo iqula lokuqubha.
Igumbi lokulala eliphambili, elijonge kwindawo yokuqubha, linebhedi enkulu ephindwe kabini. Igumbi lokulala lesibini lineebhedi ezimbini (zinokuguqulwa zibe kabini). Igumbi lokulala ngalinye linempahla elula kodwa ekhululekileyo ngewodrophu, isifuba sedrowa kunye nezibane zetafile ezisecaleni kwebhedi.
Indawo yokungena enkulu ivula ekhitshini enefriji, isitovu segesi se-4-ring kunye ne-oveni yemicrowave/igrill. Umnyango ophambili ukhokelela echibini kunye nethafa elisecaleni kwechibi, ngelixa umnyango wesibini ophuma ekhitshini ukhokelela kwimigangatho emibini yabucala ejonge emazantsi; Ithafa lesidlo sakusasa eliphezulu elinevaranda egqunyiweyo kunye nethafa lelanga elijonge igadi.
Indawo yokuphumla ineesofa ezi-2, imonitha yeTV eneDVD player kunye netafile encinci yokutyela enezitulo.
Abalandeli begumbi (i-standalone kunye netafile) banikezelwa kuyo yonke i-cottage. Iincwadi zokufunda ngeholide, ibhodi kunye nemidlalo yamakhadi nayo ibonelelwe ukuba uyisebenzise ngexesha lokuhlala kwakho.
Idama elinobude obuyi-9m by 4m kunye nethafa yalo, iindawo zokuphumlisa amadama kunye nendawo yokutyela enomthunzi, yenzelwe kuphela iindwendwe ezibhukishe i-cottage enamagumbi amabini okulala. Isiphelo esingekho nzulu sinobunzulu obuyi-80cm ngokuqhubekayo bukhula ukuya kutsho kwi-2 yeemitha kwisiphelo esinzulu.
Ukongeza, kukho ezinye iiterraces ezi-2; Indawo ejongene nelanga ejonge emazantsi ejonge igadi kwaye inikezela ngembono entle ngokusingise kwilali yase-Iznajar kunye nenqaba yayo, kunye nethafa lesidlo sakusasa eliphezulu eline-portico egqunyiweyo.
Luxanduva lwethu ukugcina ichibi lokuqubha kunye nezityalo zamanzi, kodwa ngaphaya koko injongo yethu kukunika iindwendwe zethu ubumfihlo obupheleleyo. Nangona kunjalo, sikhona ukubonelela ngoncedo kwaye sinikele ngeengcebiso kuzo naziphi na iindwendwe ezifuna oku.
Luxanduva lwethu ukugcina ichibi lokuqubha kunye nezityalo zamanzi, kodwa ngaphaya koko injongo yethu kukunika iindwendwe zethu ubumfihlo obupheleleyo. Nangona kunjalo, sikhona uku…
Iilwimi: Nederlands, Français, Español